Qaab-dhismeedka Qoyska, Qaab-Weelka Jikada, Qaab-caagga - HEYA
Heya Mold waxay ku adkeysaneysaa soo saarista tayo sare leh iyo caaryo heer sare ah oo caag ah, taas oo si sahlan loo shaqeyn karo loona ilaalin karo macaamiisha.
Heya Mold wuxuu la kulmi karaa baahiyaha macaamilka iyada oo loo marayo hirgelinta hufnaanta shakhsiyadeed ee loo habeeyay iyo hal-joojinta xallinta caaryada.
Heya Mold wuxuu horumarin doonaa oo naqshadeyn doonaa alaabada iyo caaryada sida macaamiisha ay u codsadaan inay ka caawiyaan inay badbaadiyaan kharashka mashaariicda cusub, kana dhigaan ganacsigooda mid faa'iido badan leh oo wax soo saar badan.
Heya Mold wuxuu qaataa noocyo kala duwan oo qalab casri ah, oo ay weheliso khibrad hodan ah oo ku saabsan samaynta wasakhda balaastigga ah, sahaminta caaryada ugu habboon uguna xasilloon macaamiisha.
HEYA MOLD waxay ku takhasustay soo saarista wasakhda caaga ah in ka badan 10 sano, sida wasakhaha guryaha, wasakhahaasi jikada, wasakhda qalabka guryaha, warshadaha iyo wasakhaha beeraha iyo wixii la mid ah. habeynta iyo hormarinta waqtiga ”sida qiimaha asaasiga ah, oo siineysa macaamiisha wasakhda balaastiigga oo tayo sare leh oo leh hal xalin oo caarya ah.
Waa maxay saldhig caaryada? Qaab dhismeed dhameystiran oo loogu talagalay soo saarida badeecooyin gaar ah oo budo ah adigoo riixaya ama cusbooneysiinaya. Intaa waxaa dheer, taageerada caaryada waxaa sidoo kale loo yaqaan saldhigga caaryada. Tusaale ahaan, mishiinka dhinta-ridaya wuxuu isku daraa oo hagaajiyaa qaybaha kala duwan ee caaryada sida ku cad r ...
Maxay Yihiin Sideeda Nooc ee Wasakhda Cirbaddu?
, . Waa qaabka ugu fudud uguna aasaasiga badan ee caaryada la isku duro. Waa c ...
Yaraanshaha wax taaj oo kale oo lagu durayo caaga waa mid ka mid ah sifooyinka marka heerkulka maaddadu uu qulqulayo. Qiyaasta cirbadda wareejinta waxqabadka ee duritaanka ayaa loo baahan yahay si loo go'aamiyo cabbiraadaha ugu dambeeya ee shaqada. Qiimuhu wuxuu muujinayaa qadarka foosha ee workpiece soo bandhigo ka dib marka laga saaro ...